Knowledge Archives | Page 11 of 11 | Pyae Heinn Kyaw's Blog
A13 မှာအသစ်ပါလာမယ့် Co-processor Rose or R1
Apple, iPad, iPhone, Knowledge, News / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE iOS 13 internal build တွေကို analyze လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Motion co-processor အစားထိုး processor အဖြစ် Rose ခေါ် R1 co-processor ကိုအသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် .. Rose or R1 co-processor ကြောင့် compass, gyroscope, accelerator, barometer နဲ့ microphone sensors တွေကိုသုံးပြီး 3D Maps ဖော်ဆောင်ရာမှ တိုးတက်အောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် .. ဒါ့အပြင် Inertial Measurement Unit (IMU), Bluetooth 5.1 features, ultra-wideband (UWB) နဲ့ camera (motion capture and optical tracking) sensor …
A13 မှာအသစ်ပါလာမယ့် Co-processor Rose or R1 Read More »
စိတ်ချရတဲ့ Apple Accessories (Cables) တွေဘယ်လိုဝယ်မလဲ
Apple, Apple Watch, HowTo, iPad, iPhone, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE ကျွန်တော်အခုပြောပြချင်တာကတော့ မိမိတို့ရဲ့ iDevice တွေမှာသုံးတဲ့ အားသွင်းကြိုးတို့ နားကြပ်တို့အပြင် တခြားသော Accessory တွေကိုဘယ်လိုရွေးဝယ်မလဲ . ဘယ်ဟာတွေက iPhone, iPad တွေအတွက် စိတ်ချရလဲဆိုတာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် မိမိတို့ iPhone, iPad တွေမှာပါတဲ့ Original lightning cable က အထိအခိုက်မခံပါဘူး .. ဂရုတစိုက်သုံးရင်တောင်မှ ကြိုးပေါက်ပြဲတာတို့ဘာတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. အဲ့အခါ User တွေက တွေ့ကရာ တရုတ်ကြိုးတွေနဲ့ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတတ်ကြပါတယ် .. တန်ဖိုးနည်း အားသွင်းကြိုးတွေက MFi certified မဟုတ်လို့ Battery ကို Damage ဖြစ်စေပါတယ် .. ဒါကြောင့် Original ကြိုးလေးကို ဂရုတစိုက်ကိုင်ကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ် ဒါဆိုရင် MFi ကဘာလဲ .. MFi …
စိတ်ချရတဲ့ Apple Accessories (Cables) တွေဘယ်လိုဝယ်မလဲ Read More »
Hacker တွေရဲ့ကစားကွင်း (သို့မဟုတ်) CTF
Cyber Security, Ethical Hacking, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE အခုနောက်ပိုင်း Information Security နယ်ပယ်မှာ Challenge တွေ Competition တွေတော်တော်များများပေါ်ပေါက်လာပါတယ်.. မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ Myanmar Cyber Security Challenge (MCSC) လိုပြိုင်ပွဲမျိုးတွေကို နှစ်တိုင်းကျင်းပနေပါပြီ.. ဒီလိုပြိုင်ပွဲတွေမှာအဓိက ပြိုင်ရတာကတော့ CTF (Capture the Flag) လို့ခေါ်တဲ့ Challenge မျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် CTF ဆိုတာဘာလဲ? များသောအားဖြင့် System တခု ဒါမှမဟုတ် Server တခု ဒါမှမဟုတ် Website တခုရဲ့ Location တနေရာရာမှာ Text String တခုကိုဝှက်ထားမယ်.. ပြိုင်ပွဲဝင်တွေက အဆိုပါ Server, Website တွေကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး မြုပ်ထားတဲ့ Text String ကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီ Text ကို Flag …
Hacker တွေရဲ့ကစားကွင်း (သို့မဟုတ်) CTF Read More »
iOS 13 မှာအသစ်ပါဝင်လာတဲ့ features အသစ် 75 ခု
UNICODE ပြီးခဲ့တဲ့ WWDC ပွဲမှာပြသသွားခဲ့တဲ့ iOS 13 ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုပြောပြသွားမှာပါ .. သဘောကျတယ်ဆိုရင် share ပေးသွားပါဦးခင်ဗျ .. iOS 13 တွေဟာ iPhone 6s, SE နဲ့နောက်ပိုင်း model တွေမှာ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် .. ကဲဒီတော့ iOS 13 မှာ အသစ်ပါဝင်လာတဲ့ functions အသစ် 75 ကိုစတင်ပြောပါမယ် ခင်ဗျား …. 1. ကျွန်တော်တို့ video ကြည့်တာဖြစ်ဖြစ် ဂိမ်းဆော့နေချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် အသံအတိုးအချဲ့လုပ်ရင် Volume HUD ကြီးက screen မှာကွယ်နေတတ်ပါတယ် .. iOS 13 မှာတော့ volume hud ဟာ ဘယ်ဖက်ကိုကပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး landscape view …
iOS 13 မှာအသစ်ပါဝင်လာတဲ့ features အသစ် 75 ခု Read More »